२०१७ मा तीव्र वृद्धि हुने पूर्वी एसियाका अर्थतन्त्र - Karobar National Economic Daily
२०१७ मा तीव्र वृद्धि हुने पूर्वी एसियाका अर्थतन्त्र
query_builderMarch 26, 2017 8:57 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility1277
अघिल्लो वर्ष तपाईंले मनिलाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रा गर्दा देख्नुभएको पहिलो दृश्य थियो, फ्लाइओभर निर्माण परियोजना । यो सुन्दर दृश्य थिएन र घुमाउरो बाटोका कारण तपाईंले ट्याक्सी भाडा पनि बढी तिर्नुप-यो । तर, ११.६ किलोमिटरको यो परियोजनाले फिलिपिन्सको अर्थतन्त्रलाई यसवरपरका अन्य देशको अर्थतन्त्रलाई भन्दा बढी तीव्र गतिमा विस्तार गर्दै छ ।
यसको पूर्वाधार नै आर्थिक वृद्धिको एकमात्र कारण हो । विश्व बैंकले २०१७ मा पूर्वी एसिया र प्यासिफिक क्षेत्रमा यस्तै तीव्र विकास हुने अनुमान गरेका देशहरू निम्नअनुसार छन् :
१. लाओस : कडा कम्युनिस्ट सरकार रहेको यो गरिब देशले यस वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेछ । विश्व बैंक र आसियानले ऊर्जा क्षेत्रमा व्यापक र एकीकृत लगानी गरेका कारण यो सम्भव देखिएको हो । करिब ७० लाख जनसंख्या भएको भूपरिवेष्टित यो देशले २०२० सम्ममा १० प्रतिशत घरमा बिजुली उपलब्ध गराउने गरी ऊर्जा सञ्जालको विकास गरिरहेको छ । त्यस्तै यसले ऊर्जा निर्यातको लक्ष्य पनि लिएको छ । लाओसले व्यवसायका लागि वातावरण सहज बनाएको छ । २०१६ मा यसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १३.७ अर्ब डलर थियो ।
२. फिलिपिन्स : तीव्र गतिको यातायातले मात्र होइन, पूर्वाधारमा सरकारी खर्च बढ्नाले यस वर्ष ६.९ प्रतिशतले यसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्ने विश्व बैंकको अनुमान छ । सरकारले ऐतिहासिक रूपमै यस पटक १७.७ अर्ब डलर उच्च लगानी गरेको छ । १० करोड २० लाख जनसंख्या भएको यो देशले व्यापक र प्रभावकारी कर सुधार गरेको छ र सरकारी तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पूर्वाधारका परियोजनाहरू सञ्चालन गरेको छ ।
विप्रेषण आयले अघि बढेको अर्थतन्त्रलाई पूर्वाधारले थप गति दिएको छ । त्यस्तै उपभोक्ताको खर्च र कल सेन्टरहरूको विस्तारले अघिल्लो वर्ष अर्थतन्त्रलाई विस्तार ग¥यो । एयरपोर्ट र रेलसेवा अनलाइन सुरु गरिएपछि विदेशी लगानीका कारखाना तथा पर्यटकहरू बढ्नेछन् ।
३. कम्बोडिया : दक्षिणपूर्वी एसियाली यो सानो देशको अर्थतन्त्र यो वर्ष ६.९ प्रतिशतले विस्तार हुने विश्वबैंकले भविष्यवाणी गरेको छ । गार्मेन्ट क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा भएको विदेशी लगानीका कारण यसको निर्यात बढेको छ । त्यस्तै घरजग्गाको कारोबार र निर्माण परियोजना पनि बढेको छ । भियतनामका गार्मेन्ट कारखानाहरू यहाँ सरेका छन्, किनभने यहाँको श्रमज्याला निकै न्यून छ ।
२०१५ मा गार्मेन्टको निर्यात ६ अर्ब डलर पुगेको थियो । यसको निर्यातको ७० प्रतिशत हिस्सा गार्मेन्टको छ । गार्मेन्टमा मात्रै ७ लाखले रोजगारी पाएका छन् । विश्व बैंकका अनुसार यस कम्बोडियाले पनि व्यवसाय गर्ने वातावरण निकै सहज बनाएको छ ।
४. म्यानमार : यस देशले पनि ६.९ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । २०१२ मा यहाँको सैनिक तानाशाहले विदेशी लगानी खुला ग-यो । त्यस्तै स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानी पनि उत्तिकै बढेको विश्व बैंकको भनाइ छ ।
यहाँको प्राकृतिक स्रोत, यसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, युवा श्रमशक्ति र कानुनलाई व्यवसायअनुकूल हुने गरी गरिएको परिवर्तनले विदेशी लगानीकर्तालाई लोभ्याएको छ । ऊर्जा, गार्मेन्ट उत्पादन र खाद्य तथा पेयपदार्थहरूमा विदेशी लगानीका प्रशस्त परियोजना छन् ।
५. चीन : विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेअनुसार २०१७ मा ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेछ, तर यो गत वर्षको ६.७ प्रतिशतको तुलनामा केही कम हो । यो सुस्ती १६ वर्षयताकै न्यून मानिन्छ, तैपनि विश्वकै दोस्रो अर्थतन्त्र बनेको चिनियाँ अर्थतन्त्रको विस्तार भइ नै रहनेछ ।
वित्तीय प्रोत्साहन, सडकपुलजस्ता पूर्वाधारमा विशेष ध्यान र निर्यातमूलक उत्पादनमा सरकार केन्द्रित भएकाले यसको विस्तार जारी रहनेछ । उपभोक्ता खर्च र निजी लगानीमा समेत वृद्धि भएको छ ।
राल्फ जेनिन्ग्स, फोब्र्स
अर्थतन्त्र तीव्र वृद्धि